Meting Metal Induction Fira yekunyungudutsa mhangura, goridhe, simbi simbi, nezvimwe.
musha / Applications / Induction Kusungunuka / Kunyausa Simbi Induction Vira
Categories: Kufuridza Mhangura Yesirivha, Kuvhenekesa Ndarama Vira, Igbt tilting induction yakanyungudusa chira, Induction Kusungunuka, Induction Inoyunguta Moto, Metal Melting Furnace Tags: mhangura induction vira, Kufuridza Mhangura Yesirivha, ndarama inoputika yevira, igbt induction vira, induction furnace, induction furnace manufacturer, kudonhedzwa kunyorera vira, induction simbi inonyungudiravira, induction smelting furnace, yakanyunguduka svira, simbi inosanganisa induction vira, simbi inonyungudika, tirting induction vira, tirting kunyungudira chira
Pakati pepakati IGBT inosungunuka simbi induction vira
Induction Kunyorera Zvikumbiro:
Pakati penzvimbo inonyungudutsa simbi induction vira inonyanya kushandiswa kusungunuka kwesimbi, simbi isina simbi, mhangura, ndarira, sirivheri, goridhe, uye zvinhu zvealuminium, nezvimwewo Simba rekunyunguduka rinogona kubva ku3KG kusvika 2000KG.
Chimiro cheMF inosungunuka simbi induction vira:
Iyo induction inonyunguduka chiravira yakaiswa inosanganisira yepakati frequency jenareta, inobhadharisa capacitor uye yakanyunguduka tira, infrared tembiricha sensor uye tembiricha controller inogona zvakare kuverengerwa kana akarairwa.
Mhando nhatu dzevhenji dzinonyungudika dzinogona kugadziridzwa nenzira yekudurura, Ivo vari kudzikisira choto, kusunda-kumusoro uye vira rakamira.
Zvinoenderana nemaitiro ekutsveta, kuvhenekesa chirahwe chakakamurwa kuita mhando nhatu: bhuku rekutsveta bhaira, remagetsi rinokamisira moto uye hydraulic inodzima tira.
Main maficha eMF yakanyungudika mavira:
1. MF inonyungudika michina inogona kushandiswa mukunyungudika kwesimbi, simbi isina simbi, ndarira, aluminium, goridhe, sirivheri uye zvichingodaro.Nekuda kwesimba rinokonzeresa iro rinokonzerwa nemagineti simba, dziva rinonyunguduka rinogona kumutswa panguva yekunyungudika kurerutsa kuyangarara kwemvura inoyerera uye maokisidi kuburitsa yakakwira mhando yekukanda zvikamu.
2. Wide frequency renji kubva 1KHZ kusvika 20KHZ, kushanda frequency kunogona kugadzirwa nekushandura iyo coil uye kubhadhara capacitor zvinoenderana nesimbi yakanyunguduka, huwandu, hunokonzeresa chishuwo, ruzha rwekushanda, kunyungudika kugona uye zvimwe zvinhu.
3. Simba rinoshanda riri 20% rakakwira kupfuura iyo SCR yepakati frequency michina;
4. Diki uye yakareruka, yakawanda mamodheru inogona ed kuti inyungudise huwandu hwakasiyana hwesimbi. Kwete chete iyo yakakodzera iyo fekitori, asi zvakare yakakodzera kukoreji uye kutsvagisa makambani ekushandisa.
Enzanisa nemimwe midziyo inonyunguduka
1, VS kuramba inopisa moto
a, Yakanyanya kupisa kupisa, inonyungudika nekukurumidza.
b, Simba diki, chengetedza simba 30%.
c, Nemishonga kana nesilicon carbide wemari nyore kukuvara.
2, VS Coal, Gesi, dizeli choto
a, Gonesa iyo yekugadzirisa mhinduro kuumbwa uye tembiricha, iyo bubble yecryry isingasviki 1/3 kusvika 1/4, kuramba chiyero pasi 1/2 kusvika 2/3, kuitira kuti cast ive nesimba rakakwira rechimakanika;)
b, Yakaderedza oxidation yekupisa;
c, Induction inonyunguduka inogona kusungunuka zvimedu zvekugadzirisa uye zvidimbu zvidiki nekuda kwayo yemagetsi inokonzeresa mhedzisiro. ichideredza mutengo wezvinhu .Deredza kusvibiswa kwezvakatipoteredza; ruzha rwuri kure zvishoma nemidziyo yakakura .Kusimba kwevashandi nemamiriro ekushanda zvakagadziridzwa;
d, Cast-iron crucible inoshandiswa muRasha uye gasi chirafu zvinokuvadza kune aruminiyamu chiwanikwa nekuwedzera kusachena. Graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist inoshandiswa induction ikanyunguduka pasina zvinokanganisa zvakadaro.)
3, VS SCR kana Frequency Melting Furnace
b, Simba diki, chengetedza simba pamusoro pe20%.
c, Electromagnetic inomutsa mhedzisiro ishoma saka hupenyu hwehupenyu hwekurovererwa hunowedzerwa.
d, Nekugadzirisa kuwanda kwekuzadzikisa simba murau, saka kunyungudika nekukurumidza, zvinhu zvekutsva kurasikirwa zvishoma uye zvirinani kuchengetedza simba, kunyanya kudziya kwesimbi isingaite, mhangura, silicon, aluminium uye nezvimwe zvisiri zvemagineti zvinhu, nekudaro ichideredza iyo mutengo wekukanda.